अमेरिकामा ५० वर्ष लामो गर्भपतनको अधिकार खोसियो
देशभर फैलियो मनसुनी वायु‚ आज यी प्रदेशमा भीषण वर्षाको सम्भावना
नयाँ अनुहारलाई विकल्प बन्ने चुनौती
संसद् राधेश्याम अधिकारी
सुशासन – मृगतृष्णा मात्र हो ?
अहिले देशमा राजनीतिक परिदृश्य जे देखिंदैछ – यो यसरी नै अघि बढ्यो भने निश्चित रूपमा हाम्रो राजनीति बिग्रन्छ। राजनीति बिग्रँदा सुशासनको कुरा, गफमै सीमित रहन्छ।
अघिल्लो वर्ष संघीय संरचना र कानून निर्माण लगायतका कुरामा अलमलिएको सरकार अहिले संसदमा आफ्नै पार्टीको आडमा नियन्त्रणमुखी अनुहार लिएर उपस्थित भएको छ। र, अब झन् खाँचो छ, जबर्जस्त नागरिक खबरदारीको।
सुखद समयको संकेत
पाँच वर्षपछिको स्थानीय तह निर्वाचनमा दलित उम्मेदवारले यस पटकको जस्तो विभेद महसूस गर्नुपर्ने छैन ।
संविधान संशोधन: समस्या कि समाधान?
के.पी. ओलीलगायत आजका हाम्रा नेताहरूको अगाडि दुई विकल्प छन्– आफूले जारी गराएको संविधानलाई लागू हुन दिने वा अकाल मृत्युवरण गराउने।
संसद्बाट आउने नतीजालाई सबैले मान्ने शर्तमा संविधान संशोधन प्रक्रिया टुंग्याएर निर्वाचनमा जानुको विकल्प छैन।
संविधान पालनाका चुनौती
चाहेर पनि संविधान संशोधन हुन नसक्ने र नचाहे पनि नरोकिने जटिल संक्रमणकालमा उभिएका छौं, हामी । यो परिस्थितिमा मध्यमार्ग एकमात्र विकल्प हो ।
निर्वाचन गराउनुपर्छ भनेर मात्र पुग्दैन, त्यसका लागि वातावरण बनाउन पनि एमालेले सहयोगी भूमिका खेल्नुपर्छ । कांग्रेससँग भएको सातबुँदे सहमतिमा उल्लेख भएको राज्य पुनर्संरचना मान्न एमाले हिचकिचउनु पर्दैन । उसलाई राजनीतिक रुपले कुनै हानी नपुर्‍याउने सात बुँदेले निकासको बाटो खोल्न सक्छ ।
गएको एक वर्ष त्यसै खेर गएको छैन । महाभूकम्प, नाकाबन्दी जस्ता प्राकृतिक तथा मानवीय प्रकोपहरुबाट गुज्रनुपर्दा पनि संविधान बमोजिमका कामहरु भइरहे, हुँदैजानेछन् ।